Iitattoos zesandla sikaFatima okanye uHamsa: intsingiselo, imizekelo kunye nokunye! | Ukuzoba
Iitattoos zesandla sikaFatima okanye uHamsa, intsingiselo kunye nomlinganiswa oyimfihlakalo
UMaria Jose Roldan | | Izinto kunye neeTattoos zezinto, IiTattoos zonqulo
Ngelixa ngaphakathi Ukuzoba Sele sithethile ngamanye amaxesha malunga Isandla sikaFatima okanye uHamsa, Sibone kufanelekile ukuba sinikezele inqaku elibanzi kolu hlobo lweetattoos. Umvambo, kwelinye icala, ofumene ukuthandwa kule minyaka idlulileyo ngenxa yesimboli kunye nentsingiselo. Masikhumbule ukuba iitatoo zesandla sikaFatima banobuntu obuyimfihlakalo obenza babenomdla kakhulu. Ungasathethi ke ngobume bayo.
Iitattoos zesandla sikaFatima, uJamsa okanye uHamsa (eguqulelwe njengesihlanu ngesiArabhu) zimele enye yezinto zenkcubeko eyaziwayo yamaSilamsi. Njengoko sisitsho kwaye ngenxa yesimilo sayo esiyimfihlakalo, libango elikhulu kwilizwe le tattoo. I-hamsa isusela kumaxesha amandulo yinkcubeko yamaSilamsi ukuzama ukudibanisa amazwe angquzulanayo.
1 Imvelaphi kunye nentsingiselo yesandla sikaFatima okanye uHamsa
2 Ezona tatto zeHamsa zibalaseleyo ngombala
3 Kananjalo ngeminwe isasazekile
5 Isimboli sesandla sikaHamsa kwi-Islam
6 Isimboli yesandla sikaHamsa kubuYuda
7 Isandla seHamsa Symbolism kubuKristu
8 Uyifumana phi itatato yesandla sikaFatima?
9 Iifoto zeTattoos zesandla sikaFatima (Hamsa)
Imvelaphi kunye nentsingiselo yesandla sikaFatima okanye uHamsa
Kodwa yintoni i Imvelaphi, uphawu kunye nentsingiselo yesandla sikaFatima okanye uHamsa? Njengoko siza kubona kamva, luphawu lweenkcubeko ezininzi ukusukela, ukongeza kwinkcubeko yama-Arabhu, siyayifumana nakweyamaYuda. Olu phawu lumelwe sisandla esivulekileyo esinokubonakala ngaso iliso elinye. Ngelixa kwiindawo zempembelelo yamaJuda ibizwa ngokuba nguHamsa, kwezinye zeSilamsi yaziwa ngokuba yi "Isandla sikaFatima".
Nangona imvelaphi yayo isagubungelwe yimfihlakalo, ukuza kuthi ga namhlanje iingcinga ezininzi malunga nemvelaphi yokwenene yalo mqondiso zisacingwa. Kwelinye icala sinomphathi wesanta waseCarthage, owayesetyenziswa ngamaPhencians njengophawu lwesithixokazi sabo uTanit. EMesopotamia (into esiyaziyo namhlanje njenge-Iraq) yayisele imelwe njenge ikhubalo lokhuselo elonyuse ukuzala.
Xa kufikwa ekubonakaliseni iitatoo zesandla sikaFatima, siyabona ukuba uhlala ebonakala eneminwe emithathu eyoluliweyo, ngelixa ngamanye amaxesha ubhontsi nomnwe omncinci ugobile. Iliso langaphakathi elibekwe entendeni yesandla Umelwe ukuphepha iliso elibi kunye nomona. Ngokwamanye amabali, iHamsa yayimelwe ukukhusela kumona, ukujonga kakubi kunye neminqweno engafunekiyo.
Nangona kunokubonakala ngathi azizalani, ukuba ujonga ngokusondeleyo, uya kubona ukuba iiTatoos ezininzi zeHamsa ziboniswa ecaleni kwentlanzi, kungenxa yokuba kukholelwa ukuba iintlanzi zikwangumqondiso okhuselayo kwiliso elibi kwaye zitsala okuhle amathamsanqa. Ngale ndlela ke ngokudibanisa zombini izinto, ukhuseleko olukhulu kwiliso elibi lufezekiswa.
Ezona tatto zeHamsa zibalaseleyo ngombala
Ngokwam, ndikhetha ezi tattoos ngombala. Kwaye kungenxa yeemilo zayo kunye neenkcukacha zesandla sikaFatima, ungadlala ngemibala eyahlukeneyo ukuze ufumane itattoo edlamkileyo kunye nokutsala amehlo. Kuxhomekeke kwiindidi zemibala esetyenzisiweyo kwaye idityanisiwe, sinokufumana iziphumo ezifanayo nezo zeTexico shattoos.
Kwaye kumnyama? Ewe kumnyama ezi tattoos zikwabonakala zintle. Kwaye nangona ndibathanda ngokombala ngokobuqu, andinakuphika ukuba kwimeko yabasetyhini, ukuba bathabatha umvambo ngesandla sikaFatima, besenza mnyama ngesishwankathelo esihle nesinononophelo, isiphumo sotattoo lwendalo ebuthathaka kunye neyokwenyama . Kwaye nangakumbi kuxhomekeke ekubeni i tattoo yenziwe phi.
Kananjalo ngeminwe isasazekile
Isandla sehamsa sinokumelwa ngeendlela ezimbini:
Iminwe ivaliwe kunye
Kuthiwa ukuba uyilo lokuqala imele amandla okuphepha ububiNgelixa eli lokugqibela luphawu lwethamsanqa.
I-hamsa tattoo tattoo ayisiyombulelo omangalisayo kuyilo nakwimbonakalo yayo kuphela, kodwa ikwaxhaswa ngamaxabiso enkcubeko kunye namasiko. Isimboli sihla kwiinkonzo ezahlukeneyo, kubandakanya, njengoko besesitshilo, i-Islam, kodwa kunye nobuYuda kunye nobuKristu. Ukusetyenziswa okudala kwehamsa kubuyela e-Iraq ukongeza ekusebenziseni njengokukhusela kunye nokuzikhusela kwiso elibi, kukholelwa ukuba nabani na onayo ukhuselekile naphina apho baya khona. Esi sisizathu sokuqala nesona siphambili sokuba abantu abaninzi baphathe ihamsa ngesandla ngamacici, izacholo, amacici kwaye ngoku nakwiitattoo, ukuze ihlale ikhapha kwaye ibakhusela naphi na apho baya khona.
Ukongeza, ihamsa ngesandla nayo inxityiwe okanye ibanjiwe kuba iyanceda ukuhlala ikhuselekile kubantu abathumela amandla amabi ngamehlo ngenxa, umzekelo, umona okanye ingqumbo.
Iliso kwisandla sehamsa liqinisa ngakumbi uphawu lokhuselo nxamnye nobubi. Iliso lihlala libhekisa kwiliso likaHorus, nto leyo ethetha ukuba siya kuhlala sijongiwe kwaye nokuba ufihle phi, kuba ngekhe uphinde ubaleke ukuqonda kwakho.
Ukusuka kwi-hamsa yaziwa ngokuba yi 'khamsa' eligama lesiArabhu elithi kuthetha 'isihlanu' okanye 'iminwe emihlanu yesandla'. Kuyathakazelisa ukuba wamkelwa njani lo mqondiso kwiinkolo ezahlukeneyo ngezizathu ezahlukeneyo. Kuyamangalisa ukuba zonke iintsingiselo kunye nezizathu zibilise intsingiselo kunye nentsingiselo efanayo: ukhuseleko kunye nokukhuselwa kwabanye kunye namandla amabi.
Isimboli sesandla sikaHamsa kwi-Islam
Ukuba ulandela ubuSilamsi, uya kwazi ukuba iminwe emihlanu inakho zimele iintsika ezintlanu zobuSilamsi. Zezi:
Shahâda-Mnye kuphela uThixo kwaye uMuhammad ngumthunywa kaThixo
Salat-Thandaza amaxesha ama-5 ngosuku
Izipho kwabasweleyo zakat-da
Ukuzila ukutya kweSawm kunye nokuzithiba ngexesha leRamadan
IHajj, etyelela iMecca ubuncinci kube kanye ngexesha lokudla kwabo ubomi
Ngenye indlela, olu phawu lukwabizwa ngokuba siSandla sikaFatima, kwimemori yentombi kaMuhammad uFatima Zahra.
Isimboli yesandla sikaHamsa kubuYuda
Ukuba uvela kusapho lwamaJuda, i-hamsa ikholelwa ukuba ifuzisela ubukho bukaThixo kuyo yonke into ekhoyo kweli hlabathi. Iminwe emihlanu yolu phawu ikwasetyenziselwa ukukhumbuza umphathi we tattoo ukuba asebenzise zonke izivamvo zakhe ezintlanu ukudumisa uThixo. Amanye amaYuda akholelwa ukuba iminwe emihlanu ibonisa iincwadi ezintlanu zeTorah. Ikwabizwa ngokuba sisandla sikaMiriyam, udade boMoses omdala.
Isandla seHamsa Symbolism kubuKristu
Xa kuziwa ebuKristwini, eminye imithombo ithi isandla se-hamsa sisandla seNtombikazi kaMariya kwaye sibonisa ubufazi, amandla kunye namandla. Amaxesha amaninzi, uphawu lwentlanzi yamaKristu lukwabandakanywa kunye nolu luyilo njengombala wangaphandle wentlanzi yamehlo (Ichthys). Kucingwa ukuba ngumqondiso kaKristu. Kwezinye iinkcubeko, intlanzi ikholelwa ukuba iyakhuseleka kwiliso elibi.
Ayinamsebenzi ukuba unayiphi inkcubeko, yeyiphi inkolo yakho okanye zithini iinkolelo zakho, okubalulekileyo kukuba xa uzobe umvambo wesandla sakho se hamsa uyazi ukuba oko kuthetha into kuwe kwaye ngaphandle kwamathandabuzo, uya kuyinxiba tattoo enekratshi elininzi. Ithamsanqa, ukhuseleko, ukhuseleko kunye nosapho zezona ntsingiselo zibalulekileyo zale tattoo intle kangaka bayithandayo abantu abaninzi.
Uyifumana phi itatato yesandla sikaFatima?
Malunga nokuba yeyiphi indawo yomzimba enomdla ngakumbi ukufumana itattoo yesandla sikaFatima okanye uHamsaUkuba sijonga igalari yemifanekiso engezantsi, uya kubona ukuba uninzi lukhetha ukuyenza ngasemva, entanyeni okanye kwelinye lamacala esifubeni. Ewe, kukho abantu abanobuganga bokwenza i-tattoo ezandleni zabo, kodwa enye yeziza ezichazwe apha ngasentla ingcono.
Kuya kufuneka siyiqonde into yokuba ngumvambo ekufuneka ubungakanani obuphakathi okanye obukhulu ukuba ukwazi ukuqonda zonke iinkcukacha ngokulula. Ngaphandle koko, omnye umlingo wayo ulahlekile. Ngaba kunomdla ukudibanisa nezinye izinto? Ewe, ngelixa kwezinye iimeko ndihlala ndincoma ukudibanisa uyilo oluphambili kunye nezinye izinto, kule meko, ezi tattoos zigqibelele nangona zenziwe zodwa.
Ngoku, Kuya kufuneka sazi ukuba i-tattoo yesandla sikaFatima ingaphezulu kwesandla esilula esineminwe emithathu eyoluliweyo kunye nezinye ezibini ezigobile.. Njengoko besitshilo kumanqaku angaphambili, ezinye iindidi zezinto ezinje ngeliso langaphakathi kufuneka zibandakanyiwe kwaye ezinye iintlanzi ezincinci ziya kunika umnxeba ngakumbi kumvambo wethu. Ngaphandle kokuqhubeka, sikushiya igalari eyahlukeneyo yeetato zesandla sikaFatima ukuze ufumane izimvo ngeetattoos zakho ezilandelayo.
Iifoto zeTattoos zesandla sikaFatima (Hamsa)
Apha ngezantsi unolwazi olubanzi Iifoto zegalari zeTatoo ngesandla sikaFatima ke unokufumana umbono weendawo kunye nezitayile onokuthi uzenzele itattoo:
Okwezinto ezintsha ezisandula ukwenziwa: indlela yokwenza umvambo kumanyathelo ama-XNUMX alula
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Izinto kunye neeTattoos zezinto » Iitattoos zesandla sikaFatima okanye uHamsa, intsingiselo kunye nomlinganiswa oyimfihlakalo
UMelissa rojas sitsho
Ndiyayithanda le tattoo. Ndiyayithanda intsingiselo, kwaye ikwathetha okungakumbi kum.
tattoo entle kakhulu
Ulwazi lundincede kakhulu kwaye nanamhlanje sele ndinobuso. Enkosi!
Molo, ndiyayithanda itattoos, ingabiza malini ngaphezulu okanye ngaphantsi?
Andazi ukuba awukenzi okwangoku, kodwa buza kwaye kubiza ngaphezulu okanye ngaphantsi kweedola ezingama-60, kodwa oko kuxhomekeke nakwindawo (ilizwe osuka kulo)
Ngaba umntu unokundixelela ukuba iyintoni intsingiselo yale tattoo kodwa iliso lineenyembezi
Ndinombuzo ondizalisa ngentshisakalo, ndikhangele okuninzi ngale tattoo, kodwa ndijonga kuphela uyilo oluqulathwe ngabafazi, ngaba indoda ingayenza nayo? Ndingathanda ukuyenza, kodwa ndiziva ngathi yeyona tattoo yamfazi ...
Nela zavala sitsho
Inqaku elihle kakhulu eliwonga umfanekiso. Inkcazo elungileyo kakhulu kunye nohlalutyo lwesimboli efanayo xa iyonke kunye nezinto ezenza Isandla sikaFatima okanye uHamsa kunye nendlela evela kwiinkolo ezahlukeneyo. Emva kokufunda nokuqonda intsingiselo, ngoku ndikufumanisa kunika umdla ukunxiba loo tattoo. Enkosi.
Yeyona tattoo intle kakhulu kuba imbali yayo inezinto ezininzi kunye neentsingiselo kumntu ngamnye ongumnini, ndiyazingca ngokuba nesiqwenga esimangalisayo
Iitattoo ezingaqhelekanga: vumela umbono wakho ubhabhe
Iitatto ezifihlakeleyo zabafazi: imfihlelo eya kwaziwa nguwe wedwa